आज शिवरात्री : गाँजा तान्ने सोचमा हुनुहुन्छ, स्वास्थ्यमा पर्ला असर – Health Post Nepal
२०७६ फागुन ९ गते ११:३९
शिवरात्रीमा शिवको भक्त भन्दै गाँजा तान्ने परम्परा परापूर्वकालदेखि चल्दै आएको छ। यस पर्वमा मानिसहरूले खुलेरै गाँजा तानिरहेका हुन्छन्।
प्रहरीले कडाई गरे पनि शिवरात्रीमा पशुपतिलगायत देशैभरका शिवालयमा गाँजा, भाङको लुकेर बेचबिखन भइरहेको हुन्छ। भगवान शिवले भांङ, धतुरो आदि विभिन्न पदार्थहरू सेवन गर्ने र एक पौराणिक कथा अनुसार विष समेत पिएको हुनाले उनका भक्त तथा बाबाहरूले भाङको प्रयोग गरिरहेका हुन्छन्।
गाँजा लागुऔषध भएकाले यसमा थुप्रै हानिकार तत्व हुन्छ। चिकित्सकका अनुसार एउटा गाँजाको विरुवामा झण्डै ४ सय रसायनिक तत्वहरू हुन्छन्। जस मध्ये चार तत्वहरूले मस्तिष्कमा निकै असर पुर्‌याउछन्।
गाँजाको सेवनले मानिसमा मानसिक समस्या हुने खतरा हुन्छ। यस सेवनले डिप्रेसन, आत्तिने रोग र कडा मानसिक रोग (साइकोसिस) हुने गर्दछ। गाँजाको पात, डाँठ, चोप र फलमा हुने रसमा नशा हुन्छ। जसलाई मान्छेले नशाको रुपमा प्रयोग गरेको पाइन्छ।
गाँजाका दूव्र्यसनीहरूमा मन आत्तिने, रिसाउने, बाँच्न मन नलाग्ने, आत्महत्या प्रयास गर्ने, एक्लै बोल्ने, एक्लै हाँस्ने, स्मरणशक्ती कमजोर हुने, आँखा रातो हुने, मुटुको चालमा समस्या पैदा हुने, धेरै खान मन लाग्ने, एकलकाटे श्वभाव बढ्ने जस्ता नकरात्मक असर पर्छन्।
गाँजा सेवन गर्ने मान्छेमा दम लाग्ने, ब्रोङ्काइटिस हुने, फोक्सोको क्यान्सर र मुटुको रोग लाग्ने जोखिम बढी हुन्छ। स्वास्थ्यका लागि कुनै पनि हिसावले गाँजाको सेवन राम्रो होइन।
धार्मिक मान्यताका आधारमा कुरितिलाई कहिले पनि बढावा दिनु हुँदैन। गाँजा, भाङ् खाएर मात्र शिवको भक्त भइन्छ र शिव खुशी हुन्छन् भन्ने मान्यतालाई त्याग्नु पर्छ।
कानुनले नै गाँजा सेवनलाई अवैध मानेकाले शिवको प्रसादको रुपमा ग्रहण गर्दा पनि प्रहरी हिरासतमा पर्ने सम्भावना रहेकाले यसको प्रयोग गर्नु हुँदैन।
गाँजालाई सन्तुलित मात्रामा सेवन गरे दिमाग कुल गराउने न्युरो सर्जन डा. रार्जिव शाह बताउँछन्। धेरै मात्रामा सेवन गर्दा चाहिँ यसले शारीरिक तथा मानसिक असर निम्याउँछ शाह भन्छन, ‘गाँजालाई सहि रुपमा सेवन गर्दा स्वास्थ्यको हिसाबले फाइदा जनक नै हुन्छ।’
तर, अनावश्यक रुपमा दिनदिनै सेवन गर्दा गाँजाको असर नै गर्छ। डा. शाहका अनुसार एक/दुई हप्तामा एक पल्ट सेवन गर्दा तनाव कम हुने तथा दिमागलाई फ्रेस पनि गराउँदछ।